Carlo Ancelotti oo ku hanjabay inuu ka tagayo Napoli haddii Kalidou Koulibaly la iibiyo – Gool FM
(Italy) 26 Juunyo 2019.Tababaraha Napoli ee reer Talyaani Carlo Ancelotti ayaa ku hanjabay inuu ka tagayo kooxda hadii ay maamulka ogolaadaan in la iibiyo Kalidou Koulibaly inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Wargeyska “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in tababare Carlo Ancelotti fariin uu u diray madaxweynaha kooxda Napoli uu ugu sheegay inuu ka tagayo kooxda hadii ay ogolaadaan inay iska iibiyaan 28 jirkan daafaca kaga ciyaara.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijiyay in hanjabaada tababare Carlo Ancelotti ay ka tahay mid dhab ah, inkastoo Napoli ay weli kalsooni ku qabto inay sii heysan doonto adeega Kalidou Koulibaly, kaddib markii ay iska deedeen dalab gaarsiisan 135 milyan oo ginni ah oo kaga yimid Manchester United.
Carlo Ancelotti ayaa doonaya inuu sii xoojiyo kooxda Napoli inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga si ay ugu tartamaan horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedka soo aadan, isla markaana ay meel fiican ka gaaraan Champions League.
Yeelkadeeda, kooxda Napoli ayaa si weyn lala xiriirinayaa magacyada dhowr ciyaaryahan uu qeyb ka yahay laacibka naadiga Real Madrd ee James Rodríguez.
Muxuu Ku Soo Dhamaaday Kulankii dhaxmaray kooxaha Elman Iyo Muqdisho City Club?